Ny tanjona mifandraika amin'i Obama dia mivelona amin'ny fiarahana amin'ny filoha amerikana vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Ny tanjona mifandraika amin'i Obama dia mivelona amin'ny fiarahana amin'ny filoha amerikana vaovao
Janoary 20, 2009
Avy any Nairobi ka hatrany Waikiki, mankany amin'ny vondrom-piarahamonina kely any Moneygall; ny fitokanana an'i Barack Obama ho filoham-pirenena amerikanina faha-44 dia namokatra ilay antsoina hoe "effet Obama" amin'ny touri
Avy any Nairobi ka hatrany Waikiki, mankany amin'ny vondrom-piarahamonina kely any Moneygall; ny fitokanana an'i Barack Obama ho filoham-pirenena amerikanina faha-44 dia namokatra ilay antsoina hoe "effet Obama" amin'ny toeran-fizahan-tany izay manantena ny handray soa amin'ny fiarahan'izy ireo amin'ny dian'ny filoha voafidy mankany amin'ny White House.
"Izahay dia nitondra ny The Boys Choir avy any Kenya hanao fampisehoana amin'ny hetsika marobe," hoy i Jennifer Jacobson, talen'ny varotra amerikana avaratra ho an'ny birao fizahan-tany any Kenya, tonga tany Washington ny alatsinainy teo taorian'ny fisehoana tao amin'ny CNN.
Ny Choir Boys of Kenya dia hanolotra ny sasantsasany amin'ireo galas any Washington efa notokanana. Izy ireo dia mihira karazan-kira nentim-paharazana avy any Massaai sy Sumburu, ary ireo singa afrikanina ankehitriny. Malaza any Kenya niaviany izy ireo, izay manana foko roa amby efa-polo mahery; ny repertoire -n'izy ireo koa dia mirakitra tantara an-kira koronaly eropeana sy amerikanina avy amin'ny hira Bach, Mozart, Negro Spirituals ary Karaibeana.
“Izy ireo dia raisina toy ny kintana vato; misy ny fahatsapana fa eny an-dalambe fankalazana ny fifandraisana amin'i Obama, "hoy i Jacobson momba ny fandraisana ny amboarampeo.
Barack Obama, izay rainy efa tara teraka tany Kenya, dia ankalazaina ho maherifom-pirenena ary loharanom-pireharehana amin'ny firenena Afrikana Atsinanana. Manantena ny hampiasana ny cache an'ny fiadidian'i Barack Obama ny tompon'andraikitra Kenyana mba hisarihana ireo mpizahatany hiditra ao amin'ny firenena izay vao herintaona lasa izay no niharan'ny herisetra sy ady an-trano.
Ireo mpandraharaha mpizahatany eo an-toerana any Kenya dia efa nampiditra fitsidihana ny vohitr'i Kogelo tamin'ny fanomezana natolony. Eo no nitomboan'ny dadan'i Obama ary mbola nonenan'ny renibeny. Tetikasa hananganana tranombakoka ao amin'ny tanàna natokana ho an'i Barrack Obama ihany koa no andrasana hisarika mpitsidika amerikana marobe liana amin'ny fahalalana ny fakan'ny filoham-pirenena amerikana tsy fotsy voalohany. Nanokatra birao any Nairobi ny mpitatitra amerikana Delta Airlines ary hanomboka sidina avy any Atlanta mankany Nairobi amin'ny alàlan'ny renivohitr'i Dakar renivohitra.
"Miharihary fa nanome fanantenana be dia be ny olona eto, ary azonao tsapain-tanana izany," hoy i Patrick Jucaud, mpikarakara hetsika ao Paris, avy amin'ny Basic Lead miresaka avy ao amin'ny renivohitr'i Dakar renivohitra.
“Andro miavaka be io. Ny magazine, ny gazety ary ny fahitalavitra rehetra dia miresaka momba an'i Obama. Nihaona tamin'ny talen'ny fampielezam-peo nasionaly aho ary ny hany azony resahina dia i Obama, ka misy fiatraikany lehibe amin'ny fahalasan'ny olona eto. ”
Raha efa mitarika ny famokarana tsena fahitalavitra pan-afrikanina antsoina hoe Discop Africa - kasaina hatao amin'ny faran'ny volana manaraka ao Dakar dia te-hitrandraka ny tombotsoan'i Afrika i Jucaud taorinan'ny fahalianan'i Obama hamorona tsena fizahantany vaovao na any Dakar na Nairobi ao anatin'ny enim-bolana manaraka.
"Betsaka ny fanantenana andrasan'i Etazonia," hoy hatrany i Jucaud, "Miaraka amin'ny drafitra rehetra dia mino ny olona eto fa ho fanampiana lehibe ho an'ny fampandrosoana an'i Afrika izany. Ary nanome rehareha be azy ireo izany. ”
“Na dia misy aza ny fotoana mety, dia mbola aloha loatra. Ny tena zava-dehibe dia ny fitadiavana ny zoro marina hitondra karazana fizahantany marina. ”
Ny sasany amin'ireo mpizaha tany dia nilaza fa ny fahitana ny zoro marina dia somary taraiky tamin'ny lalao ho an'ny iray amin'ireo toerana miharihary indrindra amin'ny sarintany biografikan'i Obama, toerana nahalehibe azy tany amin'ireo nosy Hawaii ravina - toerana iray izay mizaka ny vokadratsin'ny fikomiana vao haingana amin'ny isa fizahan-tany.
“Tsy dia ampy ny vitany,” hoy i Juergen Steinmetz, filohan'ny Fikambanan'ny fizahantany Hawaii vao niforona, ary mpanonta maharitra ny tranombarotra fivarotana. eTurboNews.
“Fony teto i Obama ho an'ny Krismasy sy ny Taom-baovao, dia nitoby tany Waikiki ny CNN. Tsy azo vidiana io karazana dokambarotra io ary tsy azonao omena lanja iray dolara: goavana sy nisy fiatraikany lehibe izany. ”
Saingy toy ny hoe tsy niraharaha ireo tombontsoa mety hitranga ny nisafidianan'ny filoha voafidy ny fialan-tsasatra 12 alina any amin'ny nosy Oahu, hoy i Steinmetz, izay nitarika ny fikambanana fampiroboroboana ny fizahan-tany tohanan'ny indostria mba hiezaka hamelombelona ny indostrian'ny fizahan-tany Hawaii - ary manomboka fotoana vaovao.
"Ny vokatr'i Obama dia kely fotsiny no niseho teto," hoy izy, "Ny trano fisakafoanana iray dia nanisy burger anarany aorian'izany, nisy famantarana iray nilaza fa 'Tonga i Obama', ary misy fitsidihana iray izay mitondra fiara amin'ny alalàn'ny trano nahalehibe azy. ”
Ny minisitry ny fizahantany Kenyana, Najib Balala, dia kasaina hanao dinika any New York momba ny paikady iray hanodinana ny vokatr'i Obama.
Na izany aza, tsy mijanona eo ny vokany Barack Obama. Na dia tanàna kely Irlandey lavitra iray aza dia mangataka ny sombin-drazany ho an'ny lova ho an'ny mpitarika amerikana manaraka. Ny lahatsarin'ny tarika mahatsikaiky iray eo an-toerana - izay nojerena efa ho tapitrisa tapitrisa tao amin'ny YouTube - dia mihira miaraka amin'ny feon-kira manao hoe: “tsy misy toa Irlandy toa an'i Barack Obama”.
Stephen Neill, recteur anglikana ao amin'ilay tanàna kely dia nilaza fa nahita fifandraisan'ny razamben'i Obama, Fulmuth Kearney, ary notezaina tao Moneygall izy talohan'ny nandaozany, tamin'ny faha-19 taonany, tany Amerika tany. 1850.
Na dia tsy nanamafy na nandà ny fifandraisany tamin'ny tanàna latsaky ny 300 ny ekipa Obama aza dia tsy nanakana ny fankalazana tao izany; ary tsy nanakana ny sain'ny haino aman-jery iraisampirenena izay voarain'ny vondrom-piarahamonina tato ho ato.
Mampiseho fotsiny izany fa na ny fifandraisana lavitra efa mihoatra ny zato taona sy sasany lasa izay dia afaka manomboka an'i Obama-mania, ny vokatr'i Obama.
Ny navigator ara-kolontsaina monina any Montreal Andrew Princz no tonian-dahatsoratry ny vavahadin-tserasera ontheglobe.com. Izy dia tafiditra amin'ny asa fanaovan-gazety, ny fanentanana ny firenena, ny fampiroboroboana ny fizahan-tany ary ny tetik'asa miorina amin'ny kolontsaina manerantany. Nandeha tany amin'ny firenena dimampolo mahery eran'izao tontolo izao izy; avy any Nizeria ka hatrany Ekoatera; Kazakhstan mankany India. Mihetsika tsy tapaka izy, mitady fotoana ahafahana mifandray amin'ny kolontsaina sy ny fiarahamonina vaovao.